Vaovao - Fifamatoran'ny finamanana, tetezana amin'ny varotra
Tao anatin'ny toe-java-tsarotra nateraky ny virus manerantany vaovao, dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 9 ora tamin'ny 15 aprily 2021 ny Kanto Canton faha-129 tamin'ny faha-15 aprily. andro. Tsy toy ny fampiratiana an-tserasera alohan'ny taona 2020, ny Canton Fair amin'ity taona ity dia ny Cloud Canton Fair, ary ny mpanjifa avy amin'ny firenena sy faritra rehetra dia afaka mifandray amin'ireo mpamatsy amin'ny alàlan'ny sehatra rahona. Tsy ho leo amin'ny fivezivezena na hitsidika ny fampirantiana ny mpanjifa, fa mbola afaka mianatra momba ireo vokatra mahaliana azy amin'ny alàlan'ny fantsona sy fomba maro samihafa toy ny fivarotana mivantana, horonan-tsary, serasera mpivarotra an-tserasera, ary hafatra.
Ny Cloud Canton Fair dia tsy miantoka ny fahamaimaizan'ny fampiroboroboana ny foara ara-barotra, fa ny fisorohana ny famoriam-bahoaka, ny fisorohana ny otrikaretina virus coronavirus vaovao, ary miaro ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fampirantiana rehetra sy ny fiarahamonina.
Ny totalin'ny trano heva amin'ny Kanton Fair amin'ity taona ity dia manodidina ny 60000. Antenaina fa manodidina ny 25000 ireo orinasa anatiny sy ivelany. Miisa 50 ny faritra fampirantiana, mizara 16 sokajy entam-barotra toy ny elektronika, milina, akora fananganana, entam-barotra, fanatsarana trano, lamba, akanjo ary zaridaina.
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd. dia nandray anjara indray tamin'ity fampirantiana ity. Ny vokatra natomboka dia ny vokatra fanondrahana, ao anatin'izany ny kasety mitete, ny fantson-drano mitete, ny kasety fantsom-panafody, ny famafazana, ny kojakojam-pantsaka mitete sns.
Tamin'ny alàlan'ity fampirantiana ity dia nanangana fifandraisana amin'ireo mpanjifa vahiny maro izahay. Manana ekipa matihanina R&D sy famolavolana ary ekipa serivisy marketing matihanina izahay. Mino mafy izahay fa atsy ho atsy, dia hifandray amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa maro izahay. Manantena ny fidiranao izahay!
Fotoana fandefasana: Apr-15-2021